ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရား... စောင်းတန်း
Posted by suvannasan at 11:05 PM No comments:
ခြေထောက်ပါတဲ့မြွေ တရုပ်မှာ တွေ့ရှိဆိုပဲ
အသက် ၆၆ နှစ်အရွယ် Duan Qiongxiu က ညသန်းခေါင်ယံ အချိ်န်မှာ မြွေတစ်ကောင်ဟာ သူ့မရဲ့ အိမ်ခန်းထဲမှာ နံရံကို သူ့ရဲ့ ခြေသည်းတွေကို အသုံးပြုပြီးတွက်တက်နေတာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်လို့ သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ ထူးခြားတဲ့ ကုပ်ခြစ်သံ တစ်မျိုး ကြောင့်ကျွန်မ အိပ်ယာနိုးလာခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ မီးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ (တော်သေးတာပေါ့မီးလာရက်နဲ့ဖြစ်နေလို့) အဲ့ဒီ ထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါဟာ နံရံပေါ်ကို သူ့ရဲ့ခြေသည်းတွေနဲ့ တက်ဖို့ လုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ သူမကပြောပြခဲ့ ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးသူမက ကျွန်မတွေ့တော့ အရမ်းအကြောက်ခဲ့တယ် ဒါနဲ့ဘဲ ရိုက်သတ်ပြီး အရက်ပုလင်းထဲ ထည့်လို့တယ် လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ မြွေရဲ့အရှည်ဟာ ၁၆ လက္မရှိပြီး လုံးပါတ်ကတော့ လက်သန်းထက် နဲနဲ ကြီးတယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုတော့ တရုတ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Nanchang မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့ သိပ္ပံဌာနမှာ သုတေသန ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Long Shuai က "ဒါဟာတကယ်ကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မခွဲကြည့်မှီအချိန်အတိ ဘာလဲဆိုတာမပြောပြနိုင်မှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ တခါတလေမှာတော့ တိရိစ္ဘာန်တွေဟာ ဒါမျိုးရှိတတ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
ကိုယ်ကတော့ နဂါးဆိုတာ ဒါမျိုးလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။
Posted by suvannasan at 11:55 PM 1 comment:
Inafirst, an AIDS vaccine shows some success
By MARILYNN MARCHIONE, AP Medical Writer Marilynn Marchione, Ap Medical Writer – Thu Sep 24, 7:28 pm ET
"This is trulyagreat moment for world medicine," said Lt. Gen. Eric Schoomaker, the U.S. Army Surgeon General. The Army helped sponsor the study, the world's largest of an AIDS vaccine.
It was the first time scientists tried preventing HIV the same way they treat it — withacombination approach. The study used two vaccines that work in different ways, and that may be one reason the strategy worked, even though neither vaccine did when tested individually in earlier trials, scientists say.
That benefit is modest, yet "it's the first evidence that we could haveasafe and effective preventive vaccine," said Col. Jerome Kim, an Army doctor who helped lead the study.
The outcome "gives me cautious optimism about the possibility of improving this result" and developingamore effective AIDS vaccine, said Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, which co-sponsored the study.
"It's an opening ofanew gateway toaroad that has brighter lights in it now and maybe some directions," he said. "We need to bring the best minds together and map the way forward."
That has already started. Dozens of researchers, vaccine makers and deep-pocket donors will meet next week in New York "to talk about where we go from here," said Dr. Alan Bernstein, executive director of the Global HIV Vaccine Enterprise, an alliance of government officials, AIDS scientists, funders such as the Bill & Melinda Gates Foundation, and the WHO. At the meeting will be researchers from the Thai trial, the Army and independent scientists.
"Since the 1980s, we've been hearing we're going to have an AIDS vaccine in 10 years. For the first time in my lifetime, it feels as though we're actually getting on the right track," said Josh Ruxin,aColumbia University public health specialist who runs the Access Project, which helps health centers provide AIDS care in Rwanda.
The study tested the combo in HIV-negative Thai men and women aged 18-30 at average risk of becoming infected. Half received four "priming" doses of ALVAC and two "boost" doses of AIDSVAX over six months. The others received dummy shots. No one knew who got what until the study ended.
AIDSVAX is aimed at prompting antibodies to HIV. The Sanofi vaccine spurs cells to attack the virus directly. The combo strategy "bridges the two major arms of the immune system," Francis said.
"With the limited amount of vaccine we have right now, we've gotasmall number of studies that we could do," Francis said.
Sanofi officials said the same. The company's Dr. Sanjay Gurunathan saidaseries of studies "that will takeafew years" are planned to see if the vaccine can be improved for licensing, and whether new components should be considered to boost effectiveness.
"We need to takeadeep breath and look at all the available evidence from this trial" before urging that this vaccine be used now, said Julie Davids,aspokeswoman for the Community HIV/AIDS Mobilization Project,aNew York-based prevention advocacy group.
The vaccine had no effect on HIV levels in the blood for those who did become infected. That had been another goal of the study — seeing whether the vaccine could limit damage to the immune system and help keep infected people from developing full-blown AIDS.
That is "one of the most important and intriguing findings of this trial," Fauci said. It suggests the signs scientists have been using to gauge whetheravaccine was actually giving protection may not be valid.
"It is conceivable that we haven't even identified yet" what really shows immunity, which is both "important and humbling" after decades of research, Fauci said.
Posted by suvannasan at 8:47 AM No comments:
H I V ကာကွယ်ဆေးတွေ့ပြီတဲ့ဗျို့
မန်းဇူး post by Sunday September 27, 2009
Posted by suvannasan at 8:35 AM No comments:
တရုပ်နိုင်ငံက Mengru Kang ဆိုတဲ့ တစ်နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးဟာ အမွှာပူးယောက်ျားလေး နှစ်ယောက်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာကို အင်တာနက်သတင်းတွေမှာ ဖေါ်ပြထားတာ တွေ့ရတယ်။ တစ်နှစ်သမီးလေးက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ တရုပ်နိုင်ငံရဲ့ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှာ အံသြတုန်လှုပ်သွားကြပါသတဲ့။
Mengru Kang ရဲ့ ဗိုက်ဟာ တစ်နေ့တစ်ခြား ကြီးထွားလာလို့ ဆေးရုံတင်ပြီး ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါ ယောက်ျားလေး အမွှာပူးကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားရတယ်ဆိုတာ ကို ထူးဆန်းစွာသိလိုက်ကြရတယ်တဲ့။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ အပြောကတော့ သူမကို ၀န်ဆောင်ထားချိန်မှာ နောက်ထပ်မျိုးအောင်လာတဲ့ သူမရဲ့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ သန္ဓေသားဟာသူမ၀မ်းထဲဝင်ပြီး ထပ်ဆင့်ကြီးပွါးလာတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမမွေးဖွါးရင်တော့ ခွဲစိတ်မွေးဖွါးရပါလိမ့်မယ်။ သူမ အောင်မြင်စွာမွေးဖွါးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဆရာဝန်တွေကတော့ယူဆနေကြပါတယ်။ သူမအတွက် မောင်လေးတွေလည်းဖြစ် သားလေးတွေလည်းဖြစ်တဲ့ အမွှာ ယောကျာ်းလေးနှစ်ယောက်ကို ခွဲစိတ်မွေးဖွါးဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေကြပါသတဲ့။
စကားထားဝှက်မယ်ဆိုရင် ရတယ်နော် '' ရင်ကဖွား သားလည်းမဟုတ် '' လို့ ပြောရင်ရမလားပဲ။
ကံတရားရဲ့ ဆန်းကြယ်မှု တစ်ခုဆိုရင်ရတာပေါ့လေ။
Posted by suvannasan at 9:39 AM No comments:
Posted by suvannasan at 3:49 AM No comments:
People say if you seeaWhite Peacock it will bring you good luck. For those who receive this email it is good luck every year. That's why I am sending the good luck to you – my friends, wishing you good luck and prosperity every year!
ဒေါင်းဖြူကို မြင်ရင် တစ်နစ်လုံးကံကောင်းတယ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပို့ပေးလို့ ထပ်ဆင့်ဝေလိုက်တယ်။ ဘယ်မှာရှိလည်းလို့တော့ မမေးနဲ့ နော် ကိုယ်လည်းမသိဘူး။ အေးအေးချမ်းချမ်းရှိကြပါစေ။ ကံကောင်းကြပါစေ။
Posted by suvannasan at 3:40 AM No comments:
သူနာပြုဆရာမလေး ပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားက …
မေ့ဆေးပျယ်လို့နိုးထလာတဲ့အချိန်မှာ သူ ဘေးဘီ ဝဲယာကို
ဝိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သူက လူနာအိမ်ဆောင်ခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ ရှိနေပြီး
သူ့ နံဘေးမှာ သူနာပြုဆရာမတစ်ယောက် ရပ်စောင့်နေတာ တွေ့ လိုက်ရတယ်။
ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာ အစစအရာရာ ချောချောမောမော ရှိခဲ့ရဲ့လားလို့သူက
သူနာပြုဆရာမလေးက ပြုံးပြီး …
“ကျွန်တော်က ခွဲစိပ်ခံရမှာကို ကြောက်ခဲ့တာဗျ”
“ဘာဖြစ်လို့ ကြောက်ရမှာလဲ၊ စိုးရိမ်စရာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိဘူး”
“ကျွန်တော်က အမြဲတမ်း လွဲလွဲလေးတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရသူဆိုတော့
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကြောက်တယ်ဗျ” … လို့ အစချီပြီး သူ့ ကို မွေးစကတဲက
လွဲမှားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို စီကာပတ်ကုံး ပြောပြပါတော့တယ်။
သူ့ ကိုမွေးတဲ့ ဆေးရုံမှာ ကလေးချင်းမှားမိလို့သူ့ အသက်
ဆယ်နှစ်သားလောက်အထိ အာရှသား လင်မယားကို သူ့ မိဘလို့ ပဲ မှတ်ယူခဲ့ရတယ်တဲ့။
သူ့ မိဘဆိုသူတွေကလည်း သူတို့ ရဲ့ ကလေးဟာ ဘာလို့အသားတွေ ဒီလောက်ဖွေးပြီး
မျက်လုံးဒီလောက် ပြူးရသလဲ ဆိုတာကို အဲဒီတုန်းက ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားလို
့မတတ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့။ နောက်မှ ကလေးချင်းမှားမှန်း သိပြီး သူ့ ကို သူ့ ရဲ့
မိရင်းဖရင်းတွေဆီ ပြန်သွားပို့ ပေးကြသတဲ့။ အတိအကျပြောရရင်တော့ သူ
့မိခင်ဆီပြန်ပို့ ပေးတာပါ။ သူ့ အဖေက သူ့ အမေကို နှစ်အတော်ကြာကြာကတည်းက
ပစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဥရောပသူ သူ့ မိန်းမက တရုတ် ရုပ်နဲ့ ကလေးလေး မွေးလာလို
“ကျွန်တော်နာမည်ကလည်း မှားပြီး ရ’ထားတာဗျ”
“ရှင့်နာမည်က လီရီယို မဟုတ်ဘူးလား”
“အမှန်က ကျွန်တော့်ကို လောင်ရိုလို့ မှည့်တာ။ အဲဒါ စိစစ်ရေးရုံးရောက်မှ
ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို လီရီယို ဖြစ်သွားလည်း ကျွန်တော်လည်း မပြောတတ်တော့ဘူး။”
လွဲမှားမှုတွေက အဲဒီမှာတင် အဆုံးမသတ်သေးပါဘူး။ သူကျောင်းတက်တော့လည်း
သူ’မကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပစ်မှုတွေအတွက် ခဏခဏ မှားပြီး အပစ်ပေးတာကို ခံခဲ့ရတယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကို သူက ဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်ပေမယ့် ကွန်ပြူတာက
စာရင်းမှားထုတ်လို့သူ တက္ကသိုလ်တက်ခွင့် မရလိုက်ဘူး။
“ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်ကစပြီး ထူးဆန်းတဲ့ တယ်လီဖုန်းအခွန်တွေကို
ဆောင်နေရတယ်ဗျ။ ရှေ့ လတုန်းကဆို တယ်လီဖုန်းခ ငွေ ၃၀၀/- ဆောင်ခဲ့ရတယ်”
“ရှင်က နိုင်ငံခြားဖုန်းတွေ ခဏခဏ ခေါ်ပုံရတယ်”
“ဘယ်ကလာဗျာ… ကျွန်တော့်အိမ်မှာ တယ်လီဖုန်းတောင်မရှိဘူး။”
မိန်းမရတော့လည်း မှားပြီးရပြန်ရော။ သူ့ မိန်းမက သူ့ ကို တခြားတစ်ယောက်နဲ
့ မှားပြီး လက်ထပ်ခဲ့တာ။ အိမ်ထောင်ရေးကလည်း အဆင်မပြေပါဘူး။
“သူက တခြားတစ်ယောက်နဲ့မှားပြီးလက်ထပ်ခဲ့တာလေ။ ကျွန်တော့်ကို
တကယ်ချစ်တာမှ မဟုတ်ဘဲ။ အဲဒီတော့ သူချစ်တဲ့ သူ့ ချစ်သူဆီပဲ
လူမှားပြီး ခဏခဏ အဖမ်းခံရဖူးတယ်။ သ’ူမယူဖူးတဲ့ အကြွေးတွေအတွက်
အတိုးတောင်းတဲ့စာတွေ ခဏခဏရဖူးတယ်။ ဆရာဝန်ကသူ့ ကို အခုလိုပြောတော့
“ခင်ဗျား လူလောကမှာ သိပ်ကြာကြာ နေခွင့်မရတော့ဘူးဗျာ”
ဒါလည်း ဆရာဝန်က သူ့ ကို လူနာမှားပြီး ပြောမိတာတဲ့။ တကယ်က
ဘာမှဖြစ်လောက်တဲ့ ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။ အူအတက်ပေါက်ရုံကလေးပါ။
“အခု ခင်ဗျားက ကျွန်တော့ကို ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာ ဘာအမှားအယွင်းမှမရှိဘူး
ဒီမှာတင် ပြုံးပြီးနားထောင်နေတဲ့ သူနာပြုဆရာမလေးရဲ့ မျက်နှာဟာ
“အူ.. အူအတက်ပေါက်တာ… ဟုတ်လား …”
“ဟုတ်တယ်လေ … ကျွန်တော် အူအတက်ပေါက်လို့ဖြတ်ထုပ်ဖို့ အတွက်
ဆေးရုံတက်ရတာလေ ... ဘာဖြစ်လို့ လဲ…”
“ဒါဆို ရှင်က … ယောက်ျားကနေ မိန်းမဖြစ်အောင် ခွဲစိတ်တဲ့ လူနာ မဟုတ်ဘူးပေါ့…”
Fredrick @ Phyo Wai Kyaw
စာရေးသူ နာမည်ရင်းကိုမသိလို့မဖေါ်မနိုင်တာပါ။ ရေးသူများဖတ်မိရင် နာမည်လေး ရေးပေးထားခဲ့နော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Forward ကနေ ကူးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by suvannasan at 10:11 PM No comments:
အပန်းဖြေစခန်းက ပြန်လာတဲ့ ကားတစ်စီးဟာ လမ်းတစ်နေရာ ရွံ့အိုင်မှာ ရပ်သွားခဲ့တယ်။ ကားပေါ်က သားသားနားနား ဝတ်ဆင်ထားတဲ့
“ကျွန်တော့်ကားအောက်ထဲဝင်ပြီး ဘယ်သူ ဝက်အူကျပ်ပေးနိုင်မလဲလို့” အော်ဟစ် အကူအညီ
ကားရဲ့ ဆီတိုင်ကီက ဝက်အူတစ်ချောင်း ချောင်နေပြီး ဆီတွေယိုနေခဲ့လို့
ရပ်သွားတာဖြစ်တယ်။ ဓာတ်ဆီဆိုင်နဲ့ လည်း အတန်ငယ် အလှမ်းဝေးနေတာကြောင့်
ကားပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်ဟာ အိုးဖုံးပူပေါ်က ပုရွက်ဆိတ်တွေလိုပဲ လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။
ကားပိုင်ရှင်ဘေးက လှလှပပပြင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက
“ဆုငွေရှိရင် ကူတဲ့လူ ပေါ်လာလိမ့်မယ်” လို့ပြောတော့ ကားပိုင်ရှင်ဟာ တန်ဖိုးကြီး
ငွေစက္ကူတစ်ရွက်ကို အလျှင် အမြန်ထုတ်ပြီး
“ဝက်အူကျပ်ပေးတဲ့လူ ဒီပိုက်ဆံနဲ့ ထိုက်မယ်” လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ လူတွေထဲက လူငယ်တစ်ဦး တစ်ချက်လှုပ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်
“ပိုက်ဆံရှိသူတွေရဲ့ စကားကို မယုံနဲ့” ဆိုပြီးလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကလေးငယ်တစ်Uီးက ထွက်လာပြီး
“ကျွန်တော် ကူမယ်” လို့ပြောလိုက်တယ်။
ကလေးငယ်က ကားအောက်ထဲဝင်ပြီး ဝက်အူကို ကျပ်ပေးလိုက်တယ်။ တစ်မိနစ်တောင်
မကြာတဲ့အချိန်နဲ့ ကားအောက်က ထွက်ပြီး ကားပိုင်ရှင်ကို
မျှော်လင့်ချက်မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်နေခဲ့တယ်။ ကားပိုင်ရှင်က ကလေးငယ်ကို အခုနားက
ငွေကိုလှမ်းပေးမယ်အလုပ်မှာ အမျိုးသမီးက -
“ဒီငွေကို ပေးမလို့လား? အကြွေတစ်ချို့ ပဲပေးလိုက်ပါ” လို့ ဝင်ဟန့်တယ်။
ကားပိုင်ရှင်က အမျိုးသမီးဆီက ငွေအကြွေကို ယူပြီး ကလေးကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။
ကလေးက မယူဘဲ ခေါင်းခါပြတယ်။ ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ လူအုပ်ကြားက
ဝေဖန်သံတစ်ချို့ထွက်လာတော့ ကားပိုင်ရှင်က အကြွေ တစ်ချို့ ထပ်ပေါင်းပြီး ကလေးကို
ကမ်းပေး ပြန်တယ်။ ကလေးငယ်က ခေါင်းခါပြန်တော့ စိတ်ဆိုးပြီး
“ဘာလဲ? မင်းကနည်းသေးတယ်လို့ ထင်လား? နည်းတယ်ထင်ရင် လုံးဝမပေးတော့ဘူးနော်” လို့
“နည်းတယ်ထင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဆရာမက ပြောပါတယ်။ လူတွေကို ကူညီတာ
အကျိုးအမြတ် ရဖို့အတွက် မဟုတ်ပါဘူး” လို့ ကလေးငယ်က ပြန်ပြောတော့
“ဒါဆို မင်းဘာဖြစ်လို့ မသွားသေးတာလဲ?” ကားပိုင်ရှင်က စိတ်ပျက်လက်ပျက်
“ခင်ဗျားဆီက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ကျွန်တော်စောင့်နေတာပါ”
လို့ ကလေးက ပြန်ပြော လိုက်တယ်။
လူအချင်းချင်းကြားက အပြန်အလှန်နားလည်မှုဟာ တော်တော်လေး ကြောက်ဖို့ကောင်းမှန်း
ဒီပုံပြင်က ပြော သွားခဲ့ပါတယ်။ တူညီတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာ ကာယာကံရှင်ဖက်က
ကြည့်ရင်တစ်မျိုး၊ တစ်ခြားလူဖက်က ကြည့်ရင်တစ်မျိုး စတဲ့ အမြင်မတူတာတွေ
ရှိတတ်ကြတယ်။ ဘာသာစကားက လူတွေကြားမှာရှိတဲ့ လွဲမှားတဲ့ နားလည်မှုကို
အဆက်အသွယ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာစကားက လူတွေရဲ့ ကြားအထင်
အမြင်လွဲမှားမှုကို တကယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်သလား? ဘာသာစကားနဲ့ လူတွေကြားမှာ
မရှိသင့်တဲ့ အမှားတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ လူတိုင်းမျှော်လင့်ခဲ့ကြသလား?
်အားလုံးသတိပြုစရာကောင်းလို့forward mail ကနေကူးပြီးမျှဝေလိုက်တာပါ။
မှတ်ချက်၊ အခုလိုထပ်ဆင့်ဖေါ်ပြလိုက်တာကို မူရင်းရေးသူအနေနဲ့ ခွင့်လွတ်ပေးဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ နာမည်မသိလို့ မဖေါ်ပြနိုင်တာပါ ရေးသူများဖတ်မိခဲ့ရင် ကျေးဇူးပြုပြီး နာမည်လေး ပြောပြပေးပါဗျာ။
Posted by suvannasan at 7:33 AM No comments:
တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်ဆွဲလို့ လည်ပင်းဖက်လို့နေလာခဲ့ရတဲ့ ကလေးဘ၀လေးကို ပြန်တမ်းတမိတယ်ညီမလေးရယ်၊ မိဘတွေမသိအောင် တိတ်တိတ်ပုန်းလေး အိမ်ကခိုးထွက်လို့ ပန်းခြံထဲ ပြေးလွားဆော့ကစားရတဲ့ တို့အခြေအနေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်တော့မှ မခွဲရတော့ဘူးလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်နော်။
ကျောင်းသူဘ၀တွေရောက်တော့လည်း အတန်းမတူပေမဲ့ ကျောင်းဆင်းချိန် အတူပြန်ရတာ အတူဆော့ရတာ အရမ်းသတိရနေတယ်လေ။ တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ မေဂျာတွေမတူလို့ ခွဲကြရပြီနော် ညီမလေးရယ် အဲဒီအချိန်ကတောင် လက်ချင်းတွဲလို့ လည်ချင်းယှက်လို့ ဝေးရမယ်ဆိုတာ မတွေးခဲ့ရိုးအမှန်ပါ။ အခုဝေးမဲ့ဝေးတော့လည်း တစ်ယောက်တစ်နေရာ။ တစ်နိုင်ငံစီခြားလို့ ........
အတူပြန်ဆုံမဲ့နေ့ရက်ကလေးရှိသေးရင် ညီမလေးရယ် ဟို တို့ကလေးဘ၀က အတူဆော့ကစားခဲ့တဲ့ ပန်းခြံလေးနဲ့ ရေကန်လမ်းဘေးက စိမ်ပန်းပြာပင်အောက်မှာ စကားတွေပြောချင်တယ်။ အတူပျော်ချင်တယ်။
ညီမလေးကိုအရမ်းသတိရတယ်။ အနေဝေးသွားကြပေမဲ့ စိတ်မဝေးဘူးနော်။ တို့နှစ်ယောက် ခွဲခါနီးလေးမှာ ညီမလေးပေးတဲ့ ခေါင်းအုံးစွပ်လေး မှတ်မိလား.. '' မမေ့ကြေး ''..ဆိုတဲ့.စာတမ်းလေးရေးထိုးထားတယ်လေ အဲဒီခေါင်းအုံးစွပ်လေး ပေပွသွားမှာစိုးလို့ အခုထိ သိမ်းထားတယ်ညီမလေးရယ်။
Posted by suvannasan at 9:06 AM No comments:
ဖွတ်မရ ဓား မ ရှုံး
ရွာတစ်ရွာမှာ မောင်ပု ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့။ သူက ရွာထိပ်မှာ တဲလေးထိုးပြီး တစ်ကိုယ်တည်းနေတယ်။ သူဟာ အရမ်းဆင်းရဲတယ် ပိုင်ဆိုမှုတွေကတော့ ထင်းခုတ်တဲ့ ဓားမ ကြီးတစ်ချောင်ရယ်။ ရေလှဲပုဆိုးပိုင်းတစ်ထည်၊ ခံမောက်တစ်ချပ်နဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့
သူတို့ရွာက ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ဟာ ဗေဒင်ဟောရာမှာ အလွန်မှန်တယ်လို့ သတင်းကြီးတော့ အခြားရွာကလူတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သူ တဲလေး ဘေးကနေဖြတ်သွားဖြတ်လာဖြစ်နေတယ်။ သူလည်း တစ်နေ့တော့ '' ငါ့မှာ ဆင်းရဲလိုက်တာလွန်ရော ဒီလိုဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေကနေ လွတ်မြောက်ကိန်းရှိမရှိ ဆရာတောဆီ ဗေဒင်သွားကြည့်ခိုင်းရရင် ကောင်းမယ် '' လို့တွေးတယ်။ နောက်တစ်နေ့ ထန်းလျက်ခဲလေး အနည်းငယ်နဲ့ ဆရာတော်ကျောင်းကို သွားတယ်။ လူတွေများနေတော့ ဘေးနားမှာပဲ ကုပ်ကုပ်ကလေးထိုင်နေတယ်။ လူရှင်းသွားတော့ သူက ဆရာတော်နားကပ်ပြီး မ၀ံ့မရဲနဲ့မေးတယ် '' ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော် မှာ ဆင်းရဲလှပါတယ်ဘုရား၊ ချမ်းသာဖို့ ကိန်းလေးရှိမရှိ် တပည့်တော်ရဲ့ ကံဇာတာကို စစ်ဆေးပေးပါဘုရား '' လို့လျှောက်တယ်။
ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်က နည်းနည်းတွက်ချက်ပြီး '' ဟေ့ မောင်ပု မင့် ဒီထက်ဆင်းရဲ ဦးမယ် '' လို့ ဟောလိုက်သတဲ့။ ဒီအခါ မောင်ပုဟာ စိတ်မကောင်းတာရော သူကံကြမ္မာကို ခံပြင်းတာရော စိတ်မသက်မသာနဲ့ ပြန်လာတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ '' ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ရဲ့ ဗေဒင်မှားကြောင်း တစ်နယ်လုံးသိအောင် ငါလုပ်ပြမယ် '' လို့ တွေးနေတယ်တဲ့။
နောက်တစ်နေ့တော့ သူထင်းခုတ်ရောင်းပြီးငွေစုမယ် ငွေများလာရင် ကြက်မလေးတစ်ကောင်ဝယ်မယ် နောက် ၀က်ဝယ်မွေးမယ် စတဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ ခံမောက်ကလေးဆောင်း ဆေးတန်လေးကိုက်။ ပုဆိုးအပိုတစ်ကွင်းကို လည်ပင်းမှာပတ်ပြီး တောထဲ ထင်းခုတ်သွားတယ်။
ခံပြင်းစိတ်နဲ့ခုတ်တာဆိုတော့ မနားတမ်းခုတ်တာ ထင်းတွေ တော်တော်ရလိုက်တယ်။ သူက ဒီနေ့အတွက် တစ်နိုင်စာ ထင်းတွေကိုစုစည်းလို့ ထင်းစည်းကိုထမ်းပြီး အိပ်အပြန် တောထဲကနေအထွက် ရေကလည်းဆာတော့ ရေသောက်ချင်လို့ ရေလိုက်ရှာတယ်။ တော်တော်နက်တဲ့ ရေတွင်းဟောင်းကြီးတွေ့တစ်တွင်းကိုတွေ့တော့ ထင်းစည်းလေးချပြီး ရေရှိလားလို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ သူခေါင်းမှာ ဆောင်းထားတဲ့ ခမောက်က ရေတွင်းထဲ အကျ ပါးစပ်ကလည်း '' ဟိုက် '' လို့အော်ပြီးခံမောက်ကို လှမ်းအဆွဲ ခံမောက်ရော ပါးစပ်ကဆေးတန်ပါ ရေတွင်းထဲပြုတ်ကျသွားတယ်။
မောင်ပုလည်း စိတ်မသက်မသာနဲ့ ပြန်လာ မြစ်ကမ်းနံဘေး တောင်ပို့ ကြီးနားရောက်တော့ တော်တော်ကြီးတဲ့ ဖွတ် တစ်ကောင်ဟာ တောင်ပို့ အခေါင်းထဲဝင်သွားတာသူမြင်လိုက်တယ်။ နည်းတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဖူး ဒီကောင်ကို ဟင်းဖေါ်ရောင်းရရင် ငွေတော့နည်းနည်းရတန်ရဲ့ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ဖွတ်ဝင်တဲ့ကျင်းကိုတူးဖို့ လုပ်တယ်။ မောင်ပု စဉ်းစားတယ် ဖွတ်ဆိုတဲ့အကောင်က တစ်ပေါက်ထဲမနေဘူး အခြားထွက်ပေါက်ရှိမယ်၊ ထွက်ပေါက်ကိုအရင်ပိတ်ပြီးမှ တူးတာပိုကောင်းတယ်လို့တွေးပြီး အပေါက်ရှာတော့ မြစ်ကမ်းဖက်မှာ အပေါက်တစ်ပေါက်တွေ့တော့ ဖွတ်မထွက်နိုင်အောင် သူ့ဆီပါတဲ့ ပုဆိုးတစ်ထည်နဲ့ ထွက်ပေါက်မှာ ထိုးသိပ်လို့ ပိတ်ထားပြီး ၀င်ပေါက်ကနေတူးတယ်။ နည်းနည်းလောက်ပဲတူးရရုံရှိသေးတယ် ဖွတ်အမြီးပိုင်းကို မြင်ရတော့ ဒီတစ်ခါတော့ သေချာပြီဆိုပြီး ဖွတ်အမြီးကိုလှမ်းအဆွဲ ဖွတ်ကလည်း ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ရှေ့တိုးထွက်တော့ သူ ပုဆိုးနဲ့ပိတ်ထားတဲ့အပေါက်ကနေ ဖွတ်ရော ပုဆိုးရော မြစ်ထဲကို '' ပလုံ '' ကနဲကျ သွားတယ်၊ သူလည်း သတိမေ့ပြီး လက်ထဲက ဓားနဲ့ လှမ်းပေါက်လိုက်တာ ဓါးပါ မြစ်ထဲ တစ်ခါတည်းကျပျောက်သွားတယ်တဲ့။
မောင်ပု တော်တော်စိတ်ပျက်သွားတယ်။ သူလုပ်သမျှ အရှူံးနဲ့ကြီး တွေ့နေရတယ်မို့လား....၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ထင်းစည်းလေးထမ်းပြန်လာရတယ်။ ရွာနဲ့နီးလာတော့ သူကိုယ်မှာလည်း ချွေးနဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ပေပွနေတော့ ရွာထဲမ၀င်ခင် ရေချိုးဦးမှလို့တွေးပြီး ရေစိုအ၀တ်လည်းမပါတော့ တောထုံးစံအတိုင်း သူပုဆိုးလေးချွတ်၊ ကမ်းပေါ်တင်ပြီး ရေချိုးနေတယ်။ သူရေချိုးရင် အတွေတွေလွန်သွားတယ်၊ ကဲ ပြန်ချိန်ရောက်ပြီ ဆိုပြီး အ၀တ်လှဲဖို့ ကမ်းပေါ်မှာ ထားခဲတဲ့ သူ့ပုဆိုးလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်အချိန်က ရောက်နေမှန်းမသိလိုက်တဲ့ နွားတစ်ကောင်က သူပုဆိုးလေးကို ၀ါးချေ သွားတော့တယ်တဲ့။
မောင်ပုဟာ ကြံရာမရတော့ သစ်ခက်တွေကိုယ်မှာပတ်ပြီး ရွာပြန်လာရတယ်။ ဒီအခါ သူအတွေးပေါက်ပြိး ပြောလိုက်တာက .... '' အင်း ငါ့ကို ဒီထက်ဆင်းရဲဦးမယ်လို့ ဟောခဲ့တဲ့ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ရဲ့ ဗေဒင် သိပ်မှန်ကွာ'' တဲ့...
Posted by suvannasan at 7:41 AM No comments:
မှောင်မိုက်လှတဲ့ ည..လေးတစ်ည မှာပေါ့၊ အရက်သမားရယ်၊ ဘိန်းသမားရယ်၊ ဆေးခြောက်သမားရယ် လူသုံးယောက်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို အတူသွားကြတယ်တဲ့။ လှေလေးတစ်စီးငှါးလို့ မြစ်ကြောင်း အတိုင်းစုံဆင်းလာကြတယ်။ ရေစုံခရီးဆိုတော့ အားစိုက်ပြီးလှော်စရာမလိုတော့ သိပ်ကြိးမပင်ပန်းလှဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ လမ်းရှင်းဖို့အတွက်နဲ့ လှေကို လမ်းကြောင်းမှန်ထိန်းဖို့တော့လိုတာပေါ့ သူတို့သုံးယောက်ထဲက အရက်ကြိုက်တဲ့သူက သူ့ပုလင်းလေးထုတ်ပြီး '' ငါ လှေဦးကနေ လမ်းရှင်းမယ်ဟေ့ '' လို့ပြောတယ်။ ဆေးခြောက်သမားကတော့ '' ငါက ပဲ့ထိန်းမယ်ဟေ့ '' ဘိန်းကြိုက်တဲ့သူကတော့ လှေဝမ်းထဲ အလယ်မှာ ခွေခွေလေးပဲ ဘိန်းရှူဖို့ပြင်ရင် '' မောင်ရင်တို့ သဘောအတိုင်းပါဗျား '' လိုပြောသတဲ့.......
ဒီလိုနဲ့ သူအကြိုက်သူရွေးချယ်လို့ လှေ လေးနဲ့ ခရီးထွက်လာကြတဲ့ သူသုံးယောက်ဟာ နည်းနည်းကြာလာတော့ သူတို့ မီဝဲထားတဲ့ အရက်ရှိန် ဘိန်း ဆေးခြောက်တွေက အစွမ်းပြနေလေတော့ သူနယ်ပယ်မှာ သူ့အတွေးတွေနဲ့ နှစ်မျောနေကြတုန်း လမ်းခရီးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရောက်တာမသိကြလိုက်ဘူးတဲ့
စစ်ဆေးရေးစခန်းက တာဝန်ကျ လူတစ်ယောက်က လက်နှိပ်မီးနဲ့ လမ်းထိုးပြီး
'' ဟေ့ မြစ်ထဲက လူသုံးယောက်ပါတဲ့လှေ ကမ်းကပ် '' လို့ လှမ်းအော်တယ်တဲ့ ဒီအချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ အာရုံခံစားမှုနဲ့ သဘောထားတွေတစ်ခါတည်း ပေါ်လာတော့တယ်။
လှေရဲ့ ဦးပိုင်းမှာ နေတဲ့ အရက်သမားက ချက်ချင်းပဲ ပုဆိုးကတောင်းကျိုက်လို့ '' ဘယ်ကောင်လဲကွ ... ဒီး လို့ကပ်ရမှာလား........ မိုက်ရင် လှေပေါ်လာကွ... ဘယ်ခွေး မှ လူမထင်ဘူး.......ကွ ...'' မကြားဝံမနာသာတွေဆဲပြီး စိန်ခေါ်နေတော့တဲ့...
လှေဝမ်းထဲက ဘိန်းသမားကတော့ တုန်ရီကြောက်လန့်စွာနဲ့ '' အမလေးဗျ.... ကြောက်ပါပြီဗျ... ကပ်ဆိုကပ်ပါ့မယ်ဗျ '' လိုအော်တယ်တယ်တဲ့.....
လှေ နောက်ပိုင်းပဲမှာနေတဲ့ ဆေးခြောက်သမားကတော့ '' ကြည့်ကျက်လုပ်ကြပါ မောင်ရင်တို့ရာ.......ကမ်းကပ်ဆိုလဲ ကပ်ပါ့မယ်လို့ ပြောလိုက်ပါ မောင်ရင်ရာ..... '' လို့ ပြောတယ်တဲ့.. အဖြစ်အပျက်ကတော့ ဒါပါပဲ ။ ။
ဒီလိုပါပဲ ဘ၀ခရီးမှာ တစ်လှေထဲစီး တစ်ခရီးထဲ သွားကြရတဲ့အခါ အမြင်အတွေးမတူညီမှုတွေကို တွေ့ကြတတ်စမြဲပါ။ အဲဒီအခါ အရက်သမားလို ဖြစ်လာသမျှ ဒေါသနဲ့ တုန့် ပြန်မလား သတ္တိရှိရှိ တက်တက်ကြွကြွ ရင်ဆိုင်မလား၊ ဘိန်းသမားလို ကြောက်ပါပြီဗျလို့ ကုန်းအော်နေမလား.. ဆေးခြောက်သမားလို '' ကြည့်ကြက်လုပ်ကြပါ '' လို့ သဘောတရားတွေချ ပြမလား ..
ကိုယ်ကတော့ '' စဉ်းစဉ်းစားစားလည်းလုပ်ကြပါမောင်ရင်တို့ရာ'' လို့ပဲ အော်ပြောလိုက်ပါ့ရစေနော်။
ဘ၀ အမောပြေကြပါစေ။ အေးအေးချမ်းချမ်းရှိကြပါစေ
Posted by suvannasan at 2:54 AM No comments:
နှင်းမုန်တွေကြားမှာ ၀ိုးတ၀ါး မသဲမကွဲ နဲ့ ခရေပန်းအကြွေလေးတွေ လိုက်ကောက်နေတဲ့ သမီးလေးရေ.........
သမီးဘ၀မှာ မပြည့်စုံမှုတွေများပေမဲ့ ဒီအေးချမ်းတဲ့ဘ၀လေးမှာ ပျော်နေတာ မြင်ချင်တယ်။ သမီးလေး ဟောင်းနွမ်းအ၀တ်ကိုဝတ်ထားပေမဲ့ သမီးလေးရဲ့ ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားလေးက ကမ္ဘာလောကကိုအလှဆင်နေတယ်။
ဘာမှမလိမ်းခြယ်ထားပေမဲ့ သမီးလေးမျက်နှာဟာ အပြစ်ကင်စွာ ကြည့်ကောင်းနေတယ်။
အပြင်လောကရဲ့ ဟန်ဆောင်ဖုန်းကွယ်မှုတွေက ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်နေတဲ့ မြူနှင်းတွေထက် များတယ်။ သိရခက်တယ်။ သမီးလေးလူလားမြောက်လာတဲ့အခါ သမီးရဲ့ ပင်ကိုယ်ရိုးသားဖြူစင်မှုတွေ ပြောက်ကွယ်သွားအောင် အမျိူးမျိုး သွေးဆောင်ကြလိမ့်မယ်။ အပြုံးတိုင်းဟာ မအေးမြတော့ဘူး၊ သမီးလေးရဲ့ သန့်စင်တဲ့ အပြုံးတွေ၊ ပင်ကိုယ်ရိုးသားမှုတွေကို ဆေးရောင်အမျိုးမျိုး နဲ့ ပြောင်းလှဲပစ်ကြလိမ့်မယ်။
သမီးလေးရေ.....ဘယ်လို ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာရောက်ရောက် ခေတ်မီသူ ခေတ်ဆန်သူ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်တွေကို မတပ်မက်ပါနဲ့ ခေတ်ဆန်မှုတိုင်းမှာ အကောင်းအဆိုးရှိတယ်။ ကျန်းမာရေး ပညာရေး ခေတ်မီမှုတွေ ကို တန်ဘိုးထားပါ။ သမီးလေးရေ.......... ရှမ်ပိန်၊ ဘီယာသောက်ပြီး နိုက်ကလပ်တွေမှာ ဖင်လှုပ် ခေါင်းလှုပ် ခုံပေါက်နေမှ ခေတ်ဆန်မယ်ဆိုရင် အဲဒီခေတ်ဆန်မှုမျိုးထက် သနပ်ခါးပါးကြားကွက်လေးနဲ့ ရိုးသားစွာ အကြွေပန်းလေးကောက်နေရတဲ့ ဘ၀က တန်ဘိုးရှိပါတယ်။ ပါတီတက်ပြီး ကိုယ့်အိပ်ယာ ကိုယ်ပြန်မအိပ်တဲ့ ခေတ်မီမှုထက် တောတောင်ထဲမှာ ဟင်းရွက်ခူးနေတဲ သမီးလေးဘ၀က မွန်မြတ်ပါတယ်။ သမီးလေးရေ မွန်းကြပ်တဲ့ မြို့ပြလမ်းမကြီးတွေထက် လယ်ကွင်းစိမ်းစိမ်းကြားက ကန်စင်းရိုးပေါ်လမ်းလျောက်ရတာက
ပိုကောင်းတယ်။ ပျာတစ်အုံလို ပြွတ်ခဲနေတဲ့ ကန်ထရိုက်တိုက်တွေမှာနေရ တာထက် တောင်ကုန်းလေးပေါ်က တောင်ယာတဲမှာ လွတ်လပ်စွာနေရတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမဲသမီးလေးရယ် အမြဲအေးချမ်းနေခဲ့တဲ့ သမီးလေးတို့ တောင်ယာတဲလေးတောင် လူတွေရဲ့ လောဘ ဒေါသတွေနဲ့ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး မယုံကြည်မှုတွေက သမီးတို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ကမ္ဘာလေးတောင် အခု ပျက်စီးနေပြီပဲလေ.........ဘယ်လိုဘ၀ပဲရောက်ပါစေ သမီးလေးရယ် အကြွေပန်းကောက် ထင်းခြောက်ရှာ ဘ၀မှာရှိခဲ့တဲ့ ရိုးသားမှုလေးကိုတော့ မပျက်စီးပါစေနဲ့နော်။
သမီးမွေးဖွားရာ တောင်ယာတောလေး အေးချမ်းပါစေ။ ခရေပင်ကြီး အပွင့်လှိုင်လှိုင်ဝေပါစေ။
Posted by suvannasan at 2:30 AM No comments:
အော် အိမ်နဲ့ခွဲခွါခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေ ကြာလာတာနဲ့အမျှ အလွမ်းတွေက ရင်မှာဝင်ရောက်နေရာယူလို့ နေ၀င်ချိန် ပင်လည်ပြင်ကို ငေးမောကြည့်နေခိုက်မှာတောင် စိတ်က ဒီပင်လယ်ပြင်မှာမရှိဘူး ဒီပင်လယ်ကြီးရဲ့ အခြားတစ်ဖက အမေ့အိမ်ကို ရောက်နေတတ်တယ်။ စာသင်ခန်းမှာ စာသင်နေရတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်တော့ ဘာသင်လိုက်မှန်းမသိလိုက်တဲ့ အချိန်တွေအများကြီး အလွမ်းဆိုတာ ဝေးကွာနေသူတွေအတွက် အကြောင်းပြချက်မရှိတဲ့ ဖြေသိမ့်မှုတစ်ခု ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လည်းလေ အမေနဲ့ဝေးကွာနေရတဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ ဖြေသိမ့်နိုင်ဖို့ ''အရမ်းလွမ်းတယ် မေမေ '' ဆိုတဲ့ စကားလေးနဲ့ အဖေါ်ပြုနေရတယ်။
ဒီအချိန်ဆို မေမေဘာတွေလုပ်နေမလဲ စိတ်ထဲမျှော်မှန်းလို့ အမေကိုသတိရတဲ့ စိတ်တွေ ရင်ထဲ မွန်းကြပ်ခံစားနေရပေမဲ့ ရေးဖွဲစရာ စကားလုံးရှာမတွေဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ် အမေ့ကို စိတ်က သတိရနေတတ်တာ ကြာပြီပေါ့.....
အမေ သားပြန်လာချင်ပြီ၊ အမေ့ကိုလွမ်းတယ်။ ဒီအချိန်ဆို ရေဖွေးဖွေးတွေနဲ့ စပါးခင်းလယ်တောကိုလွမ်းတယ်။ ဆွမ်းအုပ်ခေါင်းပေါ်တင်လို့ ဆွမ်းလှူသွားနေတဲ့ အမေ့ကို မြင်ရောင်တယ်။ ဖြစ်ထဲမျှောလာတဲ့ သစ်ထင်းတွေကို ရွက်လှေလေးတွေနဲ့ဆယ်ယူနေကြတာ ကိုလွမ်းတယ်။ တောင်ပေါ်က အင်ရွက်ချောက်ကြွေသံနဲ့ ပုစဉ်းရင်ကွဲအော်သံကို လွမ်းတယ်။ နွေဦး ရာသီရဲ့ ယောက်ဖခွေးခေါ် ငှက်၊ ဥသြ ငှက် တွန်သံတွေကို ကြားချင်တယ်။ စက်သံဆူညံနေတဲ့ ရွှေတူးတဲ့ လုပ်ကွက်တွေကို လွမ်းတယ်။ မီးခိုးတစ်လူလူထနေတဲ့ တောင်ယာတောတွေကိုလွမ်းတယ်။လပြည့်ည ရဲ့ ဖိုးလမင်းကို မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းမှာ ပက်လက်အိပ်လို့ ကြည့်ရင်း လေညှင်းခံရတာကို လွမ်းတယ်။ ည မိုက်ညမှာ ခွေးတစ်အုပ်ရဲ့ ထိုးဟောင်သံ အူသံတွေကို ကြားယောင်
နေတယ်။ မနက်စောစော ရွာဦးကျောင်းက အုန်းမောင်းခေါက်သံကို သတိရတယ်။
နေလုံးနီနီကြီးက မင်းသမီးတောင်ထိပ်တည့်တည့်ကို ငုတ်လျိုးဝင်သွားတဲ့ နေ၀င်ချိန်ရှုခင်းကို ကမ်းပါးထိပ်ကနေကြည့်ချင်တယ်။ ဖုန်တစ်ထောင်းထောင်းထနေတဲ့ ကျွဲ နွားတွေ အိမ်ပြန်ချိန်ကို လွမ်းတယ်။ ကျွန်းမြေ သဲသောင်ပြင်မှာ မီးတုတ်တွေထွန်းလို့ ပုရစ် ပိုးကုန်း ရှာနေတဲ့ ညမြင်ကွင်းကို ကြည့်ချင်တယ်။ အေးချမ်းတဲ့ တောသဘာဝတွေကို လွမ်းတယ်အမေရယ်။ အမေရယ် ... အမေနဲ့လည်းတွေ့ချင်တယ်။ ဒီသဘာဝ အလှတွေကို လွတ်လပ်စွာ ခံစားခွင့်ရချင်တယ်။ ဒါတွေဟာ သားလေး ဘ၀မှာ ပျောက်ဆုံးနေတာ
ကြာခဲ့ပြီမေမေ.... တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ အမေ့ ရင်ခွင်ကိုခိုလှုံချင်တယ်။ အမေ့ပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝအလှ ရှုခင်းတွေအားလုံးကို လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ကြည့်ရှုခံစားချင်တယ်အမေ။
သီချင်းလေးနားထောင်လိုက်ဦးမယ်နော် ထူးအိမ်သင်ရဲ့ အမေ့အိမ်လေးပေါ့
Posted by suvannasan at 9:08 AM No comments:
လျှပ်တစ်ပျက် မိုးက ဖြိုးဖြိုးဖျောက်ဖျောက်
ထုပ်တန်းပေါ်က ပိန်ညောင် က
ဇွတ်အတင်း ဘလော့ သွားလို့
''မင့် အဖိုး ခြေကျိုးလို့ဆေးရုံတင်'' တဲ့
Posted by suvannasan at 9:55 AM No comments:
အိပ်ခြင်းကို ရွံမုန်းသူ နှင့် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကမ္ဘာရှာဖွေသူ
ကျမ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်ပျော်သွားမိခဲ့တဲ့ ညလေးတစ်ညဟာ ကျမဘ၀အတွက် အစားထိုးမရနိုင်တဲ့ ရှူံးဆုံးမှုတွေများစွာကို ပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်။ နှလုံးသားတွေကွဲကျေခဲရတယ်။ အားကိုးရမဲ့ သားယောက်ျားလေး ဖွားမြင်တဲ့ ညမှာပဲ ကျမဘ၀ နေ၀င်သွားသလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ကျမအတွေးက ဒီသားလှရတနာလေး မွေးဖွားလာတော့ ဇနီးမယားမေတ္တာအပြင် သားလေးအပေါ် ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတစ်ခုပါ ရစ်ပတ်နွယ်လာတဲ့အတွက် ဒီတစ်ခါတော့ ကျမတို့သားအမိအပေါ် မောင်တော်ရဲ့ ချစ်မေတ္တာတွေ ခိုင်မြဲတော့မယ်၊ ကျမတို့ကို စွန့်ခွါသွားရက်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးတောမိခဲ့တယ်။ အတွေးနဲ့ ကြည်နူးမ၀ခင်မှာ မောင်တော်ရဲ့ အရိပ်အယောက်လေးကိုပါမတွေ့ရလေတော့ ရွှေနန်းတော်တစ်ခုလုံး အုံးအုံးကျွက်ကျွက် ဆူညံပွက်လို့....၊ ကျမတော့ သိလိုက်ပါပြီ မောင်တော်ဟာ သားလေးနဲ့ ကျမကိုရော ရွှေထီးရွှေနန်းကိုပါ အပြီးတိုင် စွန့်ခွါသွားပြီဆိုတာကို .............။
တွယ်တာမှုကို အခြေခံတဲ့ ကြေကွဲမှုများစွာကို အဲဒီည မိုးမလင်းခင်မှာပဲ ကျမခံစားခဲ့ရတယ်။ တစ်နေ့နေ့မှာ ဒီလိုကြေကွဲမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာကိုသိလျှက်နဲ့ မတားဆီးနိုင်ခဲ့တာ။ တားဆီးလို့ ရနိုင်မှာလည်း
မောင်တော်ဟာ သားလေးနဲ့ ကျမအနားမှာ ထာဝရရှိနေတော့မှာပဲလို့ ကျမဖာသာကျမ တွေးထင်ထား
ခဲ့မိတယ်။ ဒါဟာ ရူးသွပ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တောင် ဒီရူးသွပ်မှုလေးနဲ့ပဲ အသက်ရှင်ချင်ခဲ့တာပါ။
၀မ်းနည်းအားငယ်မှုကို ခံစားရပေမဲ့လည်း မောင်တော်က ကျမတို့သားအမိကို စွန့်ခွါသွားသည့်တိုင် အသဲတွေလည်းမမာနိုင်၊ နာ လည်းမနာနိုင်ဖြစ်နေရတယ်။ ကျမလေ... ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာတောင် မောင်တော် မင်းသားအပေါ်ချစ်တဲ့ ကျမရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေဟာ ဆံချည်တစ်မျှင်စာလေးမျှ မလျော့ပါးခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လေ ကျမရင်ထဲမှာ သိပ်မုန်းတာတစ်ခုတော့ရှိလာခဲ့တယ်။
'' အိပ်ခြင်း '' ကို ကျမသိပ်မုန်းသွားခဲ့တယ်။ '' မုန်းတယ် မုန်းတယ် '' ဆိုတဲ့စကားကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကျမစိတ်ထဲမှာ ရေရွတ်ရင်း ဒီအိပ်ခြင်းကို ကျမအရမ်းရွံမုန်းနေမိတော့တယ်။
အမှန်တကယ် အိပ်ပျော်သွားရင် လောကကြီးဘာဖြစ်လာမလည်း ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ...........
ယသောဓရာမင်းသမီးလေးလိုပဲ ကိုယ်လည်း အိပ်ပျော်သွားချိန် ချစ်သူတွေက ကိုယ့်ကိုစွန့်ခွါ....ကိုယ်က ချစ်သူတွေကိုစွန်ခွါသွားမှုတွေများ ကြုံတွေ့ရလေမလား ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ အိပ်ရမှာကို ကြောက်လန့်နေမိ
တော့တယ်။ အိပ်ရမှာကို ရွံမုန်းမိတော့တယ်။
ယသောဓရာမင်းသမီးလေးဟာ သူမအိပ်ပျော်နေမိတဲ့ ညလေးတစ်ညမှာ ရွှေနန်းတော်၊ သူမနဲ့ မွေးကင်းစ သားတော်လေးကို သူ့မောင်တော် သိဒတ္ထမင်းသား ဘုရားအလောင်က စွန့်ခွါလို့ တောထွက်သွားတဲ့
အချိန်ကစပြီး အိပ်ခြင်းကို ရွံမုန်းသွားခဲ့တယ်။
စွန့်ခွါရက်သူက စွန့်ခွါရက်သော်လည်း မမုန်းနိုင်သူအဖို့တော့ အိပ်မပျော်တဲ့ ညများစွားကိုဖြတ်သန်းလို့.....
နစ်တွေကြာလာတော့လည်း အော်... မောင်တော်ဟာ သူ့ရဲ့ပြည့်စုံမှု၊ ကြည်နူးသာယာမှုတွေကို စတေးပြီး ကျမတို့သားအမိနဲ့ ကပိလ၀တ် ပြည်သူပြည်သားတွေကို စွန့်ခွါသွားတာဟာ မုန်းလို့ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာရယ် ...လောကရှိ သတ္တ၀ါအားလုံးကို သနားကြင်နာမှုတွေနဲ့ ကယ်တင်ဖို့ဆိုတာရယ်.. သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျမရော သားလေးနဲ့ ကပိလ၀တ်နေ ပြည်သူပြည်သားအားလုံးပါ မောင်တော် ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ '' အေးငြိမ်းတဲ့ ကမ္ဘာသစ် '' မှာ အပူအပင်ကင်းစွာနဲ့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းနေကြရပြီဆိုတာ သဘောပေါက်နားလည်သွားတော့တယ်။
ဘုရားအလောင်းသိဒ္ဒတ္တမင်းသားနဲ့ ယသောဓရာမင်းသမိးလေးအကြောင်းကို အိပ်မပျော် တဲ့ ညလေးတစ်ညမှာ ခံစားမှုတွေနဲ့ ရောမွေလိုက်မိတယ်။
Posted by suvannasan at 8:54 PM No comments:
'' တို့တော့ အသက်ကြီးပါပြီကွာ ပညာသင်ရတာ သိပ်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ '' ပြောသူတွေအတွက် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကေလနီယတက္တသိုလ်မှာ MA တန်း တက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ ဒီမေမေက '' ငါမအိုသေးဘူး ''လို့
ပြောနေသလိုပဲ လူငယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူ ပညာသင်ယူနေတယ်။ ဒို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် ဒီအသက်အရွယ်ဟာ မြေးချီနေတဲ့အရွယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တရားဘာဝနာပွါးနေလောက်တဲ့အရွယ်ပေါ့။ သိပ်အံ့သြစရာကောင်းတယ်နော်။ ရာသက်ပန် ပညာရေးစနစ်ကို မိးမှောင်းထိုးပြနေသလိုပဲ။ ဒီမေမေကြီးက ကျောင်းသားတွေထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံးပဲ အခြား ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ အသက်အရွယ်ထဲမှာ ဒီအမေက အကြီးဆုံးမို့ ဦးတည်ရေးရပေမဲ့ တစ်တန်းတည်းမှာပဲ အသက် 50 ကျော် 60 ကျော် ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အများကြီးပဲ 2009- ခုနစ် ကေလနိယတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကြီးပေါ့။ ဒီအမေကြီးကိုမြင်တော့ ကျောင်းတက်ရတာနည်းနည်း အားရှိလာတယ်။ တို့နိုင်ငံက ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေကို ဒီအကြောင်းပြောပြချင်တယ်။ နောက်အလျဉ်းသင့်ရင်တော့ စာတစ်စောင်ဖြစ်အောင်ရေးဦးမယ်။ အခုတော့ အချိန်မရလို့ဗျို့ ဒီလောက်ပဲ ရေးလိုက်တယ်။
Posted by suvannasan at 7:56 AM No comments:
မန္တလေးမှာမွေးတဲ့ မန္တလေးသားမဟုတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်မန္တလေးကိုချစ်တယ်၊ မန္တလေးမှာပျော်တယ်။ မန္တလေးကိုသတိရတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တက္ကသိုလ်မတက်ခက်အစောပိုင်း နှစ်နှစ်လောက်အပြင် တက္ကသိုလ်တက်ဖြစ်တော့ လေးနှစ် တစ်ခါကျောင်းပြီပြန်တော့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တာလိုလို ကွန်ပျူတာသင်တာလိုလိုနဲ့ ယောင်တောင်တောင်နေလာတာက နှစ်နစ်ဆိုတော့ မန္တလေးကို သတိရတယ်လိုပြောရင် မလွန်လောက်ပါဘူးနော်။
ကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆို မန္တလေးတောင်ပေါ်တက်ပြီ လေးပြင်လေးရပ် အလှအပရှုခင်းတွေကို ငေးမောကြည့်ရတာ အရမ်းပျော်စရာကောင်းတယ်။ အင်း .... အတွဲလေးတွေတွေ့ရင်တော့လည်း မသိမသာချောင်းကြည့်မိခဲ့တယ်ပေါ့။ မန်းတောင်ထိပ်ကနေ ညို့မှိုင်းနေတဲ့ ရန်ကင်းတောင် ရေတံခွန်တောင်ရှုခင်းတွေ၊ ကွေ့ကောက်စီးဆင်းနေတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးနဲ့ မင်းကွန်းတောင်ရိုး၊ မင်းဝံတောင်၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရှုခင်းတွေ မသဲမကွဲ ၀ိုးတ၀ါးမြင်ရတဲ့ စစ်ကိုင်းတံတားကြီး၊ မြိုတွင်းဖက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်း အရင်ဆုံးလမ်းမြင်ရတာက အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ရတနာပုံ နန်းမြို့ရိုးနဲ့ ကျူံးရေပြင်၊ လယ်ကွင်းစိမ်းစိမ်းတွေနဲ့ ပဏာရနေတဲ့ မြောက်ကဖက်ရှုခင်းတွေ အိုး.... ပြောရင်းဆိုရင်း သတိတရ တမ်းတစရာ လွမ်းစရာတွေကို ပိုပြီးတော့တောင်လွမ်းလာတယ်။ ကဲ မန္တလေးရဲ့ အလှအပတွေနဲ့ ကြုံဆုံဖူးတဲ့သူတွေနဲ့ အဝေးရောမန္တလေးသားတွေအတွက် လက်ဆောင်လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်။ ရွှေမန်းဆီသို့ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနားထောင်ပြီး အလွမ်းပြေနိုင်မလား ပိုပြီးတော့ပဲ လွမ်းလာမလား.............ဆိုတာ။
Posted by suvannasan at 11:47 PM No comments:
ဘုရားရှင်လက်ထက်က သိင်္ဂါလ ခေါ်တဲ့ သူဌေးသားတစ်ယောက်ဟာ
ရာဇဂြိုဟ်မြို့အပြင်ကိုထွက်ပြီး ရေစိုအ၀တ်ကိုဝတ် ရေစိုစိုနေတဲ့ဆံပင်တွေနဲ့
အရှေ့အရပ်၊ တောင်အရပ်၊ အနောက်အရပ်၊ မြောက်အရပ်၊ အတက်အရပ်၊
အောက်အရပ် ခေါ်တဲ့ အရပ်6မျက်နှာကို လက်အုပ်ချီပြီးရှိခိုးနေတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ မြတ်စွားဘုရားက ရာဇဂြိုဟ်မြို့တွင်း ဆွမ်းခံကြွစဉ်မှာ အရပ် 6
မျက်နှာကို ရှိခိုးနေတဲ့ သိင်္ဂါလ သူဌေးသားကို မြင်တော့
မြတ်စွာဘုရားက “ သူတို့သား သင်ဟာ စိုစွတ်တဲ့အ၀တ်၊ စိုစွတ်တဲ့ ဆံပင်တွေနဲ့
အရပ်6မျက်နှာကို လက်အုပ်ချီရှိခိုးနေတာဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ”
သိင်္ဂါလ သူတို့သားက “ မြတ်စွာဘုရား..... တပည့်တော်ရဲ့ အဖေ
မသေခင်လေးမှာ “ ချစ်သား အရပ်6မျက်နှာကို သေချာစွာစိတ်စွဲလို့
အမြဲရှိခိုးရစ်ပါ “ လို့နောက်ဆုံးစကားမှာထားခဲ့တာကြောင့်
မိဘစကားလေးစားသောအားဖြင့် တပည့်တော် အရပ်6မျက်နှာကို
ရှိခိုးနေပါတယ်ဘုရား “ လို့လျှောက်ထားတယ်။
မြတ်စွာဘုရားက သိင်္ဂါလသူဌေးသာ…… အရပ်6မျက်နှာကို သေချာစွာစွတ်စွဲလို့
အမြဲရှိခိုးရမယ်လို့မှာခဲ့တဲ့ သင့်ဖခင်ရဲ့ စကားဟာ အခု သင်ရှိခိုးနေတဲ့ အရှေ့အရပ်၊ တောင်၊ အနောက်၊ မြောက်၊ အထက်၊
အောက်အရပ်တွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး ဟုမိန်တော်မူတယ်။ သိင်္ဂါလ သူဌေးသားကလည်း မြတ်စွာဘုရာ အရပ် 6
မျက်နှာဆိုတာ ဘာတွေပါလဲဘုရား လို့ ထပ်ပြီးလျှောက်ထားတယ်။ အဲဒီအခါ မြတ်စွာဘုရားက
အမိ၊ အဘ စတာတွေဟာ အရပ်မျက်နှာတွေဖြစ်တယ်။ အမိဝတ်၊ အဘ၀တ်စတာတွေကို နေရာတစ်ကျ
ပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းတွေဟာ အရပ်6မျက်နှာကို ရှိခိုးခြင်းဖြစ်တယ် လို့မိန်တော်မူတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျေးဇူးရှင်လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီက ကဗျာသံပေါက်ကလေးစပ်ဆိုထားတယ်။
အရပ်ခြောက်မျက်နှာ6ပါးအကျဉ်း
-မာတာ ပိတာ၊ ရှေ့ဒိသာ၊ ဆရာတောင်ရပ်ငြား။
-သား, မယားလျှင်၊ အနောက်ခွင်၊ မိတ်သင်မြောက်အလား။
-ကျွန်ကျေးအောက်ဟူ။ အထက်မူ၊ သူမြတ်ရဟန်း ပုဏ္ဏား။
-အရပ်ဒိသာ၊ ခြောက်မျက်နှာ၊ လုံစွာ ဆို့ပိတ်ထား။
အမိအဘတွေကို သားသမီးကျင့်ဝတ်အတိုင်း၊ သားသမီးတွေကို မိဘကျင့်ဝတ်အတိုင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုမျိုး၊ ဆရာတွေကို
တပည့်ကျင့်ဝတ်အတိုင်း၊ တပည့်တွေကို ဆရာကျင့်ဝတ်အတိုင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုမျိုး၊ သားသမီးနဲ့ ဇနီးမယားအပေါ်
လင်ယောက်ျားကျင့်ဝတ်အတိုင်း၊ လင်ယောက်ျားအပေါ် ဇနီးမယားကျင့်ဝတ်အတိုင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုမျိုး၊ မိတ်ဆွေ
အပေါင်းအသင်းတွေအပေါ်မှာ မိတ်ဆွေကျင့်ဝတ်အတိုင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုမျိုး၊ ကိုယ်ရဲ့အလုပ်သမား
၀န်ထမ်းတွေအပေါ်မှာ အလုပ်ရှင်ကျင့်ဝတ်အတိုင်၊အလုပ်ရှင်အပေါ် အလုပ်သမား ၀န်ထမ်းတွေက စောင့်ရှောက်မှုမျိုး၊
ပညာရှိ သူတော်ကောင်း ရဟန်းသံဃာတွေကို ယုံကြည်စွာ ဆည်းကပ်မှုမျိုး ဒီကျင့်ဝတ်တွေကို နယ်ပယ်အသီးသီးအလိုက်
လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းတွေဟာ အရပ်6မျက်နှာကို ရှိခိုးတာပါပဲ။
ဒီနေရာ ကျင့်ဝတ်တွေကို ကဗျာလင်္ကာလေးတွေပဲရေးတော့မယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သိလောက်ပါပြီ။
သားသမိးတို့က ပြုလုပ်ရမည့် ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး
1. မွေးတုံ့မွေးမှု၊ ပြုဖွယ်ပြု၊ ကုလမျိုးနွယ်တည်။
ဆက်ခံအမွေ၊ သေလွန်ပေ၊ မျှေ၀၀တ် ငါးမည်။
မိဘတို့က ကျင့်ရမည့် ကျင့်ဝတ် ( ၅ )ပါး။
2. မကောင်းမြစ်တား၊ ကောင်းရာထား၊ သင်ကြားတတ်ပညာ။
လျော်ရာအိမ်ပေး၊ အမွေပေး၊ ကျင့်ရေးဝတ် ငါးဖြာ။
တပည့်တို့က ကျင့်ရမည့် ကျင့်ဝတ် ( ၅ )ပါး
3. ထ ကြွ လုပ်ကျွေး၊ သင်အံမေး၊ ကျင့်ရေးဝတ်ငါးဖြား။
ဆရာသမားတို့က ကျင့်ရမည့် ကျင့်ဝတ် ( ၅ )ပါး
4. ယဉ်ကျေးစေမှု၊ မှတ်စေမှုနှင့်၊ တတ်မှုမချန်၊ ပြန်၍ဆောင်နှင်း၊ ဘေးကင်းစေမှု
လင်ယောက်ျားတို့က ကျင့်ရမည့် ကျင့်ဝတ် (၅ )ပါး
5. မပေါ့စားမှု၊ နာဖွယ်မှုနှင့်၊ သူကိုမကျူး၊ စိုးမှူးလွဲထား၊
၀တ်စားဆင်ယင်၊ ဤငါးအင်၊ လင်တို့ပြုရမြဲ။
အိမ်သူမယားတို့က ကျင့်ရမည့်ကျင့်ဝတ် (၅ )ပါး
6. အိမ်ရေးတွင်ကျယ်၊ အိမ်ဝယ်လူပေါင်း၊ ကောင်သားပြုအင်၊ စင်ကြယ်သီလ၊ ဓနစောင့်ထိန်း၊
မပြိန်းမပျင်း၊ အရင်းတရား၊ ၀တ်ငါးပါ၊ မယားပြုရမြဲ။
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့အပေါ် အမျိုးသားတို့က ပြုရမည့် ကျင့်ဝတ် ( ၅ )ပါ။
7. ပေးဝေမျှတ၊ ပီယနှုတ်ချို၊ ကျိုးလိုပြုမူ၊ ကိုယ်တူပြုခြင်း၊
မချွတ်ယွင်းစေ၊ ဤငါးထွေ၊ မိတ်ဆွေကျင့်ဝတ်မျိုး။
အလုပ်ရှင်တို့က ပြုကျင့်ရမည့် ကျင့်ဝတ် ( ၅ )ပါး
8. အားတန်ခိုင်စေ၊ ကျေအောင်ပေးကျွေး၊ နာရေးပြုငြား၊ အစားကောင်းမျှ၊
လွှတ်သင့်ကလွှတ်၊ ကျင့်ဝတ်တရား၊ ဤငါးပါ၊ မှတ်သားအရှင့်ဝတ်။
အလုပ်သမားက အလုပ်ရှင်အပေါ် ပြုကျင့်ရမည့်ကျင့်ဝတ် ( ၅ )ပါ။
9. အလျင်ထမြောက်၊ နောက်မှအိပ်ရေး၊ ပေးမှလည်းယူ၊ ပြုမူကောင်းတုံ၊
ဂုဏ်ကိုပြောကြား၊ ဤငါးပါး၊ မှတ်သားကျွန်တို့ဝတ်။
ဒါယကာတို့ ကျင့်ဝတ် ( ၅ )ပါး
10. မေတ္တာသုံးပါး၊ တံခါးဟင်းလင်း၊ ကျွေးမွေးခြင်း၊ ငါးသင်းလူတို့ဝတ်။
ရဟန်းတို့က လူတို့အပေါ်ပြုကျင့်ရမည့်ကျင့်ဝတ် ( ၅ )ပါ။
11. မကောင်းမြစ်တာ၊ ကောင်းရာညွှန်ကြား၊ သနားစိတ်နူး၊ မကြားဖူးက၊
ပြသသွန်သင်၊ ကြားဖူးလျှင်မူ၊ ချဲ့ထွင်ခွဲခြမ်း၊ နတ်လမ်းရှင်းလင်း၊ ဖေါ်ပြခြင်း၊
ဒီတရားတွေဟာ ကြိးပွါးတိုးတက်လိုသူတွေအတွက် အထောက်အပဲ့ အမှီကောင်းတွေပါ။
ကိုယ်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ အမြဲကျင့်သုံးသူတစ်ယောက်ဟာ ကြီးပွါးတိုးတက်မှာမလွဲပါဘူး။ ကိုယ်က
သူများရဲ့ပြုံးပြမှုကိုလိုချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း သူများကိုပြုံးပြနိုင်ရမယ်။ ကိုယ်မိဘဖြစ်လာတဲ့အခါ
ကိုယ့်သားသမိးတွေရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေ ကျေးဇူးသိတတ်မှုတွေကို မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုရင်
ကိုယ်သားက သားသမိးဖြစ်နေခိုက်မှာ မိဘအပေါ်တာဝန်ကျေဖို့လိုပါတယ်။
မိတ်ဆွေကောင်းကိုလိုချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း မိတ်ဆွေကောင်းပီသဖို့လိုတယ်လေ။
ဒီလိုပါပဲ လူဘ၀မှာ ကိုယ်ကသားသမီးဖြစ်လိုက်။ မိဘဖြစ်လိုက်၊ ဆရာဖြစ်လိုက်၊ တပည့်ဖြစ်လိုက်နဲ့
လုံးချာလိုက်နေတော့ အလှည့်ကြမနွဲစတမ်း ကြုံလာတဲ့ ဘ၀ပေးတာဝန်တွေကို
ကျေနပ်စွာပေးဆပ်မှု ရယူမှုတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီးလျောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။
နောက်အလျင်းသင့်ရင်တော့ မိတ်ဆွေတု၊ မိတ်ဆွေစစ်အကြောင်းနဲ့ မိတ်ဆွေအမျိုးအစားတွေ အရက်သောက်ခြင်း၊
Posted by suvannasan at 6:06 AM No comments:
အိပ်ခြင်းကို ရွံမုန်းသူ နှင့် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကမ္ဘာရှ...